Photo Editor Pro 1.199.37 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.199.37 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ Photo Editor Pro
Photo Editor Pro ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဓာတ်ပုံ Editor Pro ကိုသငျသညျဓာတျပုံတည်းဖြတ်ချင်အရာအားလုံးပေးထားပါတယ်။ စတိုင်သက်ရောက်မှု, filter များ, Grid ၏တစ်ဦးကအိမ်ရှင်များနှင့် tools တွေကိုဆွဲသင်တို့ရှေ့မှဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ဘယ်တော့မှင့်လျှင်ပင်, သင်မျက်စိ-Catcher ဖန်တီးကူညီပေးသည်။ ဓာတ်ပုံ Editor Pro ကိုနှင့်အတူသငျသညျကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှု Unlock နှင့်လိုလားသူများကဲ့သို့ဓါတ်ပုံတွေကိုတည်းဖြတ် Instagram ကို, Whatsapp, Facebook, စသည်တို့ကိုရန်သင့်အနုပညာလက်ရာများ post နိုငျပါသညျ!
👓 ရုပ်ပုံများ အဘို့အ 60+ စိစစ်မှုများ
- Lomo, ပန်းရောင်, အမွမ်းပုံ, သဘာဝ, ပူနွေး, နှင်း, အမှောင်, ကိုကိုး ...
- အရောင်အဝါဆန့်ကျင်ဘက်, ရွှဲ, အရောင်အသွေး, နွေးထွေးမှုစသည်တို့ကို Adjust
✨ ဆက်ကြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု & Blur နောက်ခံ
- GB ကို, RG, နီယွန်, အနုတ်, လောကဓာတ်, Pixel, ငါးမျက်လုံးနဲ့ပိုပြီး;
- DSLR Blur Effect ရဖို့ Blur ဓာတ်ပုံကိုနောက်ခံ။
👑 ဓာတ်ပုံ Blender & အလင်း FX
- Bokeh, မှန်ဘီလူး, splash နဲ့အလင်းပေါက်ကြားသက်ရောက်မှုများစွာ။
💃 ခန္ဓာကိုယ် Retouch
- သင့်အချိုးအစားပိုကောင်းစေခြေထောက် Elongate;
- အကွိမျမြားစှာဆံပင်, ကြွက်သားနဲ့တက်တူးစတစ်ကာများ။
🎨 ဓာတ်ပုံမှ Collage သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
- ချက်ချင်းဓာတ်ပုံ collage သို့ 18 ပုံတစ်ပုံမှတက်ပြန်ရောသမ;
- ကနေရှေးခယျြဖို့ 100+ Grid, ကြီးမားနောက်ခံပျဉ်ပြား, filter များ,
- ဟယ်လို, Aesthetic, ကာတွန်း, အီမိုဂျီ, ကောက်ကြောင်းသရုပ်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်ကလေးများအတွက်ပိုပြီးဓာတ်ပုံကိုစတစ်ကာများ။
+ Power လွယ်ကူ photo-editing tools တွေကို;
ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံကိုသက်ရောက်မှုများအတွက် filter များရာပေါင်းများစွာ +;
ခန္ဓာကိုယ် & မျက်နှာပိန်စေဘို့ + ခန္ဓာကိုယ်အယ်ဒီတာ,
100+ အပြင်အဆင်များနှင့်နောက်ခံနှင့်အတူ + ကောလိပ်ထုတ်လုပ်သူ;
DSLR မှုန်ဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ + Blur ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ,
+ ကိုခပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအနုပညာဖောင့်တွေနဲ့စာသားကို add;
+ သီးနှံ, ဒေါင်လိုက်နှင့်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း, လှည့်;
+ ရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်ဘက်, နွေးထွေးမှုနဲ့ရွှဲစသည်တို့ Adjust;
+ Insta 1: Instagram ကို 1 စတုရန်း & မှုန်ဝါးနောက်ခံ။
စသည်တို့ကို Instagram ကို Facebook က, Whatsapp မှမြင့်မားသော resolution ဖြင့် + Share ဓာတ်ပုံများကို
100+ ဓာတ်ပုံ Effect
ချစ်စရာကောင်းဓါတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်သင်၏ဓါတ်ပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ sparkling, အနုပညာ, အဟောင်း, ဗေဒ, စပျစ်သီးကို filter များ, တောက်ပနေ, ပြသမှု, ချို့ယွင်း, ကောင်းကင်တမန်သည်အတောင်ပံဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက် ... ဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်ဝင်စားဖို့ features တွေရှိပါတယ်သင့်ရဲ့ Discover အဘို့အစောင့်ပါ။
ဗေဒဓာတ်ပုံ Editor ကို
ဗေဒဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာသင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံအေးမြဗေဒချို့ယွင်းသက်ရောက်မှု add ခွင့်ပြုပါတယ်။ ချို့ယွင်းသက်ရောက်မှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့စိတ်ခရီးစတင်ပါ။ သငျသညျ Aesthetic စတိုင်တစ်ပန်ကာဖြစ်လျှင်, သင်သည်ဤ Aesthetic ဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာကိုကျော်သွားလို့မရပါဘူး။
မှုန်ဝါးဓာတ်ပုံ Editor ကို
A-ကြရမည်ဖြစ်သည်အဆင့်မြင့်မှုန်ဝါးပုံရိပ်ဖြီးနှင့်အတူဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာမှုန်ဝါး။ ဒါဟာ DSLR မှုန်ဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုရဖို့သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအစိတ်အပိုင်းများမှုန်ဝါးကိုအသုံးပြုသည်။ သင်တို့သည်လည်းခဲဖျက်နှင့်အတူပုံရိပ်ကို unblur နှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာယင်း၏မှုန်ဝါးတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကိုထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။
ဆက်ကြောင်းဓာတ်ပုံ Editor ကို
ဆက်ကြောင်းဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာမဟုတ်ဘဲကောင်းစွာဟောင်းကျောင်းနှင့်ခေတ်သစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စတိုင်များပေါင်းစပ်။ ယင်း၏ချို့ယွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု Instagram ကိုအပေါ်သင်၏ဓါတ်ပုံများမျက်စိ-Catcher စေသည်ရာပြင်းထန်သောအမြင်အာရုံပဋိပက္ခများ, တတ်၏။
ဓာတ်ပုံ Editor ကိုနယူးဗားရှင်း 2018
ဓါတ်ပုံတွေကိုအဘို့အကြီးမား filter များနှင့်အတူအခမဲ့တစ်ဦးကအသုံးဝင်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ။ ခိုးအခမဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်သင်ဆက်ကြောင်းသက်ရောက်မှုနှစ်ချက်ထိတွေ့မှု, ဓာတ်ပုံကို Blender စတာတွေနဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဓါတ်ပုံကိုအနုပညာလက်ရာများပါစေ။
ဓာတ်ပုံ Editor ကိုအခမဲ့
အဆိုပါပျံ့နှံ့နေတဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ Instagram ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ဗားရှင်းအသစ်ကို 2018 ဓာတ်ပုံ collage ထုတ်လုပ်သူ။ ဒါဟာစတစ်ကာများ, Grid, နောက်ခံနှင့်အခြားဓါတ်ပုံကိုတည်းဖြတ် tools များအပါအဝင်န့်အသတ် features တွေနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။
ဓာတ်ပုံမှ Collage သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
ရုံအများအပြားဓါတ်ပုံတွေကို select, ဓာတ်ပုံ Editor ကိုချက်ချင်းအေးဓာတ်ပုံတစ်ပုံ collage သို့သူတို့ကိုငါ remix ။ သငျသညျ filter များ, နောက်ခံ, စတစ်ကာများ, စာသားစသည်တို့အားဖြင့်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးကြိုက်တယ် layout ကို, ပြင်ဆင်ရန် collage ကောက်လို့ရပါတယ်
ဓာတ်ပုံ Editor Pro ကိုကျွန်တော်ဓါတ်ပုံတည်းဖြတ်လျက်သိမ်းဆည်းနိုင်အောင်သင်၏ဓါတ်ပုံများဖတ်ရှုဖို့ခွင့်ပြုချက် "READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE" အတှကျကမေးတယ်။ ကျနော်တို့ကိုအခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဒီခွင့်ပြုချက်ကိုမသုံးကြဘူး။
ဓာတ်ပုံ Editor Pro ကိုချက်ချင်းသင့်ရဲ့ပါထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါဟာအရိုးရှင်းဆုံးပေမယ့်အများဆုံးအသုံးဝင်ဓာတ်ပုံကိုသက်ရောက်မှုအယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ Editor Pro ကိုနှင့်အတူ, သင့်ယခုအချိန်တွင်အနေနဲ့အနုပညာလက်ရာများကဲ့သို့တောက်ပကြလိမ့်မည်။ သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးအခမဲ့ခံစားရသည်။ အီးမေးလ်: collageteam.feedback@gmail.com ။
Photo Editor Pro အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Photo Editor Pro အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Photo Editor Pro အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Photo Editor Pro အား အခ်က္ျပပါ
yahwehshammanh စတိုး 1 3.46k
Photo Editor Pro ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Photo Editor Pro အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.199.37
ထုတ်လုပ်သူ InShot Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.myinstashot.com/privacypolicy.html
Photo Editor Pro APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ